Ibhuloho "Rainbow" - olunye lwezimpawu of Japan. Njalo izivakashi unyaka abaningi Admire wathumela kuye bevela kuzo zonke amakhona umhlaba. I-Japanese zithi ibhuloho Akukhona kuphela yona enhle, kodwa futhi imilingo. Yiziphi izici zalo? Ake sizame ukuqonda.
Le nganekwane mayelana Rainbow Ibhuloho
I-Japanese akholelwa ukuthi ukhona endaweni wasenganekwaneni onqenqemeni ezulwini. Ibizwa nangokuthi le "Rainbow Ibhuloho". Inganekwane ethile ithi ngemva kwalokhu kuphila kukhona enye into. Lapho ukubulala isilwane sasekhaya usezofika Ekugcineni, kuyoba ukuhamba ngesikhathi Rainbow Ibhuloho. Ngemva kokudabula lokho, yena uthola on the izimfunda siluhlaza, lapho uzobe phakade frolic nezinye izilwane, kwaze kwaba ngosuku oluthile uyozizwa inkosi yakhe ethandekayo beza kuye. Kuleli qophelo, bayoba luhlanganise futhi ungalokothi wokulamula.
Ibhuloho uxhuma yamabhizinisi Minato-ku nge siqhingi yokufakelwa of Odaiba. It has izingqimba ezimbili, lapho ke emendweni, ujantshi omncane nokuhamba umzila. Ubude Rainbow Ibhuloho eTokyo ifinyelela 918 metres, futhi ukuphakama 126 amamitha. Ngesikhathi eziqongweni pylons asekelayo isakhiwo ibhuloho amapulatifomu wokubuka ngokufanele, kuzo lapho ukuze ujabulele bay. amahle Ikakhulukazi kubukeka ekushoneni kwelanga kanye entathakusa.
Ibhuloho lakhiwa iminyaka 5. It lavulwa ngo-1993.
Kungani Rainbow Ibhuloho?
Noma ubani oye wezwa kuBaba futhi leli gama okokuqala, cishe ngokushesha Uyoletha wokwakha ezinye bejabule, ababethi ezihlukahlukene imibala. Nokho, noma ibhuloho ngesimo nothingo. Eqinisweni, ntambama e-Tokyo ibhuloho ubukeka ezahlukene kakhulu.
It is built in isiko zobuchwepheshe isitayela futhi zaveza emhlophe. ukukhanya kuphela kwenza kube imilingo ngempela. Uba enhlobonhlobo lapho kuhlwa. Kuyaphawuleka ukuthi umbukiso kumane Amazing.
Buka kwaleli bhuloho usuka endaweni ephakeme
Uma kokuba ezweni ngaselangeni njengoba liphuma, uyofuna bewuthanda inhloko-dolobha yombuso kweso lenyoni, qiniseka ukuthi uvakashela ehhovisi lika "Fuji TV". Emphemeni observation, wahlela ngaphakathi omkhulu ibhola esobala wanamathela phakathi namabhilidi, kunikeza ithuba ubone yonke ubuhle Tokyo. Ngokuphelele ebonakalayo lapho, Rainbow Ibhuloho.
Esikhanyayo izibani eziningi Quay, ophithizelayo ibhizinisi wesifunda, ophithizelayo ngisemsebenzini onguthelawayeka iluphu - konke lokhu, futhi, angabona futhi ukuthatha izithombe kusukela emphemeni observation.
Ungamangali ukubona eduze Rainbow Ibhuloho emhlabeni Statue odumile Liberty. Lena akuyona kuwutalagu, okuyinto ngempela uyakwazi amaJapane, futhi ikhophi evamile. Kuyinto kane ezincane kuno-New York yokuqala, kodwa ngaphansi kwesimo lihlobe yonke imibala kwebhuloho rainbow ubukeka umxhwele kakhulu.
Kwakuthinta efakwe imali zimali ngo-1998, lapho Japan lugujwe ngonyaka eFrance. Njengoba kuhlelwa Abahleli, the Statue of Liberty lifanekisela intando yeningi kanye ilungelo lokukhetha. Ngemva konyaka, iziphathimandla adiliza into ebaziwe omkhulu, kodwa kwathi phakathi nokubusa kwayo phezu Tokyo Bay Statue wakwazi ukuthola uthando olunjalo ethandwa kakhulu kangangokuba kuze kwadingeka ukuba ngibuyele emuva ngingahambi. Lena ujabula kakhulu, futhi abantu bendawo kanye nezivakashi.
Japanese dolobha Symbol
Ngokusho tour opharetha, kanye nemithombo yolwazi phambili isiko of Japan (isibonelo, Dolls Japanese), Rainbow Ibhuloho ingenye ezikhangayo esemqoka Tokyo. Yiqiniso, kuyinto enhle, kulula ukuyisebenzisa futhi ubukeka umbukwane emakhasini ecwebezelayo ikhambo nezincwajana. Kodwa uma kuwukuthi indima nehaba empilweni yamasiko yenhloko-dolobha? I-Japanese bayajabula ukutshela izivakashi ukuthi ubunjalo kule ndawo.
Ngoba abantu baleli zwe Rainbow Ibhuloho - akuyona nje isakhiwo yezakhiwo. Wayebonakala ukuhlanganisa uxhumano nomsebenzisi nangenkathi ezahlukene. Into wukuthi kule quay lasendulo Tokyo kwaba ifakwe izinqaba eziningi, eklanyelwe avikele umuzi futhi lonke leli zwe kusukela uma kunosongo lwempi, ezingase zivela olwandle nganoma yisiphi isikhathi. Sekungamakhulu amaningi eminyaka ulwandle wema aqaphe obhekene ukuphepha izakhamuzi.
Kodwa lesi siqhingi sasibizwa kakade esakhiwe ezikhathini zanamuhla. Kuyaphawuleka ukuthi yokufakelwa iziqhingi Japanese kanye Great Wall of China - izakhiwo kuphela owenziwa ngezandla zabantu ngubani kuyabonakala noma emkhathini! Enye yalezi zimpawu ezingenhla iyona Odaiba.
Rainbow Ibhuloho (Tokyo), ukudalulwa kwalo okungahle kakhulu ehlangene umlando kanye namasiko kulo lonke elaseJapane, kuzokusa esiqhingini efanayo. Phela, lo nokuvakasha ngezinyawo kuthatha kuphela ngekota yehora, futhi ezojabulisa esingakhulumekiyo.
Umlando walo kwaqala ekhulwini le-19, lapho ubuholi wezwe banquma ukwakha iziqhingi yokufakelwa. Le phrojekthi engabe wadala imisebenzi engaphezu kuka-11, kodwa ukuqaphela lezi imigomo emikhulu ayengakwenza kancane kuphela. I-Japanese eyakhelwe iziqhingi ezinhlanu, ezintathu zazo eziye zaba khona isikhathi esifushane.
Ekuqaleni, esiqhingini Odaiba lempi ukufaka ise main. Ngokuhamba kwesikhathi, profile yayo ishintshile.
Lesi siqhingi kuyinto yesimanje, ezimhlophe futhi ocwebezelayo, njengoba indlela eya kuso. Itholakala izindawo zamabhizinisi, amahhovisi, amahhotela, izindawo zokudla eziningi kanye nezindawo zokuzijabulisa ezingabazekayo. Namuhla, ingqalasizinda ndawo ithuthuka ngokushesha, izinkulungwane zezihambeli ziyafika lapha yezitolo, ukuzijabulisa, yebo, cuisine emangalisayo Japanese.
Phakathi iziqhingi eziningi Japanese siphela zokudla eziningi elintantayo, eziningi zazo futhi usebenzise izibani emibalabala. Konke unikeza Rainbow Ibhuloho charm nakakhulu.
Ihhotela "Ibhuloho" Adler: Izibuyekezo nezithombe izivakashi
Guest house Adler ogwini: i Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza
Zigodi Psakho emifuleni kanye namabhodi ezithombe zabahamba
Indlela ukukhansela update "windose 7": isitatimende
Isikhathi sokuphila kwamangqamuzana egazi abomvu nezilwane
Thoracic emgogodleni osteochondrosis: Izimpawu kanye Ukwelashwa
"Bunnies" Tapochki- - njalo isipho nice!
Oleg Gusev biography, izimpumelelo football
Zokupheka umhlabeleli of Dungan cuisine
Yini okufanele ibe yi-pulse yokushisa kwamafutha?
Isikhathi sesikhashana. Yeka ukuthi kunzima kanjani!
Ascension: Indaba ngenkathi owatholakala ngayo, indawo kanye indawo okuqondene
Aida Nikolaichuk - inkanyezi Ukrainian vocal show "X-Factor"